Pinnacle Studio 17 Ultimate Full Crack - .::just for share::.
Home » video editing » Pinnacle Studio 17 Ultimate Full Crack
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ 2014 ခုနှစ်ရဲ.အကောင်းဆုံး Video Editing ဆော့ဝဲလ်တွေထဲက တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ Pinnacle လေးပဲဖြစ်ပါတယ် သူ.မူရင်းဆိုဒ်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင် $ 129.95 ဒေါ်လာလောက်ကြပါတယ် ရောင်းဈေးရောဆော့ဝဲလ်အကြောင်းရောအပြည်.အစုံသိချင်ရင် ဒီနေရာ မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံအနေနဲ.ဘယ်သူမှဝယ်မသုံးမဲ့ဆော့ဝဲလ်မျိုးပေါ့ဗျာ ဟီးးး ဈေးကြီးလို. :P ကျွန်တော်ကတော့ Full Version ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်လို.သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ နည်းနည်းကြီးပါတယ် 1.3GB ရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော့အနေနဲ. ဒေါင်းပြီးစမ်းယုံပဲစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် ပြန်တင်ပေးဖို.ဆိုတာ အိမ်မက်လိုပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် သူများတင်ထားတဲ့လင့်မှာသာ ဒေါင်းယူနိုင်အောင်ပြန်ချိတ်ထားပါတယ် 201MB စီခွဲတင်ပေးထား တာကြောင့် အားလုံး ခုနစ်ပိုင်းပါပါတယ် လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဇွဲရှိဖို.လိုပါမယ် ဟီးးးးး မဒေါင်းနိုင်ရင်လဲ အိမ်လာယူပေါ့ဗျာ ...... :P ကျွန်တော်တော့ ဒေါင်းပြီးစမ်းပြီးဖြစ်ပါတယ် ဖိုင်ပြန်မပေါင်းတက်သူများအတွက်
ဒါကတော့ နမူနာလုပ်ပြထားတဲ့အတွက်ဆော့ဝဲလ်နာမည် တော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒေါင်းထားတဲ့7ဖိုင်လုံး ကို slect လုပ်ပြီး R click နှိပ် အနီနဲ.၀ိုင်းပြထားတဲ့ နေရာလေးကို ကလစ်လိုက်ယုံပါပဲ အားလုံးပေါင်းထားပြီး သားဖိုင် တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ဒါဆိုအိုကေပါပြီ ဒေါင်းထားတာတွေဖျက်ချင်ဖျက်ပေါ့ လိုချင်တယ်ဆိုရင် တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ အပိုင်းအားလုံးဒေါင်းယူပါရန်........အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ